Kere, fitsaram-bahoaka, fanahiana adim-poko, andramena… : mila vahaolana sy fandraisana andraikitra haingana ireo olana | NewsMada
Kere, fitsaram-bahoaka, fanahiana adim-poko, andramena… : mila vahaolana sy fandraisana andraikitra haingana ireo olana
Miseholany ny olana etsy sy eroa eo anivon’ny fiarahamonina ifotony. Tamin’ity herinandro ity fotsiny, ohatra: eo ny disadisa momba ny fitrandraham-bato any Ankaraoka, Anjozorobe. Raha nisy ny maty, aiza ny faty? Iza no nitifitra sy nampitifitra? Mila fanazavana ofisialy hisorohana ny fifampiampangana, fandrahonana… Ahina hivadika ho adim-poko ny raharaha, na hiafara amin’ny politika…
Resabe tamin’ity herinandro ity koa ny amin’ny fanondranana an-tsokosoko andramena, indrindra ireo bolabola miisa 30 000 latsaka kely tratra tany Singapour. Misy ny tomponandraiki-panjakana ambony voasaringotry ny fitsarana any an-toerana amin’izany. Mila manazava izay tena tomponandraikitra: ara-dalàna sa tsia ny fanondranana izany, ary iza no nanao azy na tompony?
Ahoana ny amin’ny fitsaram-bahoaka mbola mahazo vahana etsy sy eroa? Vao tamin’ny herinandro no saika nitranga izany tany Moramanga noho ny lozam-piarakodia nahafaty olona dimy. Tsy azo nosorohina ny fitsaram-bahoaka tany Maroantsetra: nisy ny aina nafoy. Inona ny vahaolana haingana sy maharitra? Tsy matoky mpitandro filaminana sy fitsarana ny vahoaka ifotony sasany.
Eo ny olana mandavantaona…
Olana lehibe tsy azo odin-tsy hita koa ny amin’ny haintany sy kere any atsimo, tsy vitan’ny fivoriana atrikasa sy fandrafetana tetikasa. Mandra-pitrangan’izay hitranga na ny vahaolana maharitra, mila vahaolana haingana ny mponina. Inona no ataon’ny tomponandraikitra? Toy izany koa ny amin’ny aretina ambalavelona: mila fanasitranana… Tsy vitan’ny fifanazavana hoe azo sitranina na tsia.
Efa iainan’ny vahoaka isan’andro ny amin’ny tsy fandriampahalemana, manomboka amin’ny fanendahana ka hatramin’ny fanafihan-jiolahy sy dahalo mahery vaika. Hatramin’izao, tsy hita mazava izay tena fiavian’ny fitaovam-piadiana. Toy izany koa ny amin’ny halatra taolam-paty: saika manenika ny Nosy, mandavantaona. Tsy hita izay tena atidohabeny, na izay fanadihadiana aza.
Amin’ny ankapobeny sy santionany ireo… Mila vahaolana haingana sy maharitra, fandraisana andraikitra. Fa tsy famonoana afo isaky ny mihetsika, na fisehoana hoe manao… Hisy ve ny fahamarinan-toerana sy fitoniana, raha tsy hita izay farafahakeliny tokony ho vita?